रोचक जानकारी – Page3– MeroJilla.com
९० घन्टा लामो प्रवचन दिएर विश्व कीर्तिमान राख्ने अभियान सुरु Monday, August 27th, 2018
काठमाडौं । योगसाधक अनन्तराज केसीले सबैभन्दा लामो प्रवचन दिएर विश्व कीर्तिमान राख्ने अभियान सोमबारदेखि सुरु गरेका छन् । नुवाकोट घर भएका ५० वर्षीय केसीले ९० घन्टा लामो प्रवचन दिएर विश्व कीर्तिमान राख्न प्रवचन सुरु गरेका हुन् । काठमाडौंको जोरपाटीस्थित इस्टपोल विद्यालयमा सोमबार बिहान सवा ६ बजेदेखि सुरु भएको प्रवचन यदी भदौ १५ गते राति सकाउने लक्ष्य लिइएको छ । कार्यक्रमका..
दाङमा भेटिए सरीरैभरी भुत्लै भुत्ला भएका बालक , बोक्सोको आरोप लाग्दा धुरुक्कै रोए बालक (फोटो फिचरसहित) Monday, August 13th, 2018
बिष्णुकुमार देवकोटा दाङ - दाङमा सरीरैभरी भैसीको रौं जस्तो भुत्लै भुत्लाले आधा आँङ ढाकिएका ८ बर्षिय बालक भेटिएका छन् । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं ८ बेलुवा गाँऊमा पिता दिलबहादुर रावत र आमा शिला रावतको कान्छो छोराको रुपमा २०६७ सालमा जन्मिएका दिवश रावतको सरीरै भरी जन्मजात यस्तो कालो दाग र सरीरैभरी भुत्लैभुत्ला पलाएको आमा शिला रावतले जानकारी दिनुभयो । “वावुको..
खाएको तीन दिनपछि दिसामा सुनको सिक्री भेटियो Monday, July 30th, 2018
विराटनगर । कोशी अञ्चल अस्पतालमा प्रहरी निगरानीमा राखिएका इटहरीका सुरजकुमार नेपालले सोमबार सुनको सिक्री दिसा गरेका छन् । तीन दिनअघि विराटनगर जलजला रोडको राठी ज्वेलर्समा ग्राहक बनेर गएका उनले एक तोला सुनको सिक्री नै निलेपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अस्पतालमा राखेर निगरानी गरेको थियो । नेपालले सिक्री निलेको भन्दै ज्वेलर्सका सञ्चालक अरुण राठीले प्रहरीमा उजुरी गरेपछि उनलाई..
रातमा कुकुर रोए किन अशभु संकेत मानिन्छ ? यस्तो छ कारण Sunday, July 29th, 2018
यो कुरा जानकारीमुलक भएकोले सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। नेपाली धर्म र परम्परालाई मान्ने हो भने हाम्रा समाजमा रहेका कयौँ बस्तुहरु छन् जसले जीवन र मृत्युका संकेतहरु दिइनै रहेका हुन्छन् । परापूर्वक कालदेखि पुर्खाहरुले अनुभव गर्दै आएका कति घटनाहरुले ति मान्यताहरुलाई प्रमाणित समेत गरिदिएको छ । हाम्रो टोल छिमेकमा सजिलै भेटिने र घरमा पालिने कुकुर तथा बिरालो हामीमध्ये..
एकै पटक धेरै गाईवस्तु दुहुने यन्त्र Tuesday, July 10th, 2018
ललितपुर - नेपालमा पशुपालन व्यावसायिक बन्दै जाँदा किसानले एकै पटकमा धेरै गाईको दूध दुहुुने उपकरण (मिल्किङ पार्लर) को प्रयोग गर्न थालेका छन् । चार पाँच वर्ष पहिलेदेखि नेपालमा व्यावसायिक किसानले मिल्किङ पार्लरको प्रयोग शुरु गरेको पशु उत्पादन निर्देशनालयमा कार्यरत डा सुरेन्द्र झा बताउँछन् । व्यावसायिक रुपमा धेरै गाई पाल्ने किसानले यसको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । बजारमा..
ठमेलमा वेटर भएर सेकुवा बेच्दै, वल्र्ड कप देखाउँदै महावीर पुन Sunday, June 17th, 2018
दिपक के श्रेष्ठ काठमाडौं - नेपाली सूचना र सञ्चार जगतमा वायरलेस प्रविधिमार्फत दूरदराज पुगेका सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन यतिबेला राजधानीकाे ठमेलमा सेकुवा बेच्दैछन् । ठमेलकाे मण्डला स्ट्रिटमा देख्न सकिन्छ पुनकाे रेष्टुरेन्ट ‘महावीर दाइ’ज रेष्टुरेन्ट ।’ विश्वकप फुटबल सुरु भएपछि उने मेनुमा नयाँ अाइटम थपेका छन्, महावीरकाे सेकुवा । सेकुवामा ब‌ंगुर र खसीकाे मासु प्रयाेग..
यसकारण भयो धमिलो वर्षा Saturday, June 16th, 2018
काठमाडौं । सामान्यताः हामीले देख्दै र भोग्दै आएको परिस्थितिभन्दा फरक अनुभव गर्‍यौं भने त्यसले चकित तुल्याउँछ । शुक्रबार राति परेको पानीले पनि काठमाडौं उपत्यका र मुलुकका विभिन्न ठाउँका मानिसलाई त्यस्तै बनायो । शुक्रबार राति र शनिबार बिहान परेको पानी अरु दिनकोजस्तो सफा थिएन । पानी धमिलो थियो । धेरैले ठाने, हिलोसहितको पानी बर्सियो । यो हो वास्तविकता पश्चिमी वायु..
मन्दिरमा पूजासँगै मुसाको संरक्षण Sunday, June 3rd, 2018
ललितपुर- घरमा मुसाले दुःख दिएर हैरान हुनुहुन्छ ? कति पटक त कपडा नै च्यातिदिएर लाउन नमिल्ने भएको होला । धेरैले मुसा भगाउनका लागि अनेक उपाय पनि गरिरहेको हुनसक्छ । धेरैले मुसा भगाउनका लागि अनेक उपाय लगाइरहँदा कुनै ठाउँमा मुसा संरक्षण गरिन्छ भन्नेसुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा नै एउटा त्यस्तो मन्दिर छ जहाँ मुसाका लागि दैनिक खानेकुरा छुट्याउने गरिन्छ । पाटन..
२० मिनेटका लागि भाडामा पाइन्छ प्रेमिका Wednesday, May 30th, 2018
बेइजिङ । चीनको एक सहरमा एक्लोपन महसुस गर्दै आएका युवालाई ध्यानमा राखेर भाडामा प्रेमिकाको व्यवस्था गरिएको छ । गुआङ्गडोङ्ग प्राप्तको ह्युआन सहरमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘दि भिटालिटी सिटी सपिङ्ग कम्प्लेक्स’ मा भाडाका प्रेमिका बन्न तयार युवती लस्करै उभिएका हुन्छन् । पोडियममा उभिएका ती युवती कुनै पनि पुरुषसँग भाडामा प्रेमिका बन्न तयार हुन्छन् । भाडामा प्रेमिका..
खरबुजा गर्मीमा सबैभन्दा बढी खाइने र धेरैलाई मनपर्ने फलफूलमध्ये एक हो खरबुजा । धेरैलाई लाग्छ यसमा पाइने भनेको चिनीको मात्रा र पानी मात्र हो । तर, यो धेरै खनिज पदार्थ, भिटामिन र थोरै क्यालोरी भएको फल हो । यसमा पाइने भिटामिन ‘ए’ ले कपाल र छालालाई पनि राम्रो गर्छ । यसमा पाइने धेरै पानीको मात्रा र फाइबरले पाचन प्रणालीलाई सहयोग पुर्याउनुका साथै कब्जियत हुनबाट पनि जोगाउँछ । यसमा..
युवतीका यी १४ तस्विर जसले सन्सनी मच्चायो,हेरौं Thursday, May 17th, 2018
एजेन्सी। सामाजिक संजाल यस्तो ठाउँ हो जहाँ कोही हिट भयो भने उ रातारात सुपरस्टार बन्न सक्छ । पछिल्लो समय एक पंजाबी युवती फेसबुकमा अत्याधिक भाइरल भइरहेकी छिन् । उनको सुन्दरताले यतिसम्म चर्चा पाएको छ कि उनका फोटोहरु अत्याधिक भाइरल भइरहेका छन् । यी युवती हुन् खुसी गढवाल । केही पंजाबी म्युजिक भिडियोमा देखिएकी खुसी पछिल्ला समय यतिसम्म भाइरल भइरहेकी छिन् कि उनलाई छिट्टै बलिउडमा..